Rikoooo.com - Ogwe njikwa njikwa - iwu nzuzo
Rikoooo.com - Amụma nzuzo
Iwu a kọwara n'ụzọ zuru ezu etu “Rikoooo.com” yana ụlọ ọrụ ndị ọzọ jikọtara ọnụ (nke dị n'okpuru "anyị", "anyị", "anyị", "Rikoooo.com", "https://www.rikoooo.com/forum_phpbb3") na phpBB (nke a ka “ha”, “ha”, “ha”, “phpBB ngwanrọ”, “www.phpbb.com”, “phpBB Limited”, “phpBB team”) na-eji ozi ọ bụla anakọtara n'oge nnọkọ ọ bụla nke iji gị. (nkea bu “ihe omuma gi”).
A na-anakọta ozi gị site n'ụzọ abụọ. Nke mbu, site na ime nyocha “Rikoooo.com” ga - eme ka ngwanrọ phpBB mepụta otutu kuki, nke bu obere ederede ederede ana ebudata na faịlụ ihe nchọgharị kọmputa gị nwa oge. Kuki abụọ ndị mbụ nwere naanị njirimara onye ọrụ (nke a bụ “njirimara njirimara”) yana njirimara nnọkọ na-enweghị aha (nke dị n'okpuru "id-id"), site na ngwanrọ phpBB kenye gị ozugbo. A ga-emepụta kuki nke atọ ozugbo ịchọgharịrị isiokwu n'ime "Rikoooo.com" ma ejiri ya iji chekwaa isiokwu ndị a gụpụtara, wee mezie ahụmịhe onye ọrụ gị.
Anyị nwekwara ike imepụta kuki na mpụga na ngwanrọ phpBB mgbe ị na-eme nchọgharị "Rikoooo.com", n'agbanyeghị na ndị a abụghị oke akwụkwọ a nke ezubere iji kpuchie ibe naanị na ngwanrọ phpBB mepụtara. Secondzọ nke abụọ anyị si anakọta ozi gị bụ site n'ihe anyị nyefere anyị. Nke a nwere ike ịbụ, ọ bụghịkwa na: ikenye dị ka onye ọrụ na - amaghị aha (nke a kpọrọ "aha na-amaghị ama"), ịdenye aha na "Rikoooo.com" (nke dị n'okpuru "akaụntụ gị") na post nke ị debanyere aha na ebe ịbanye. "Gị posts").
Akaụntụ gị ga-enwe obere aha pụrụ iche (nke a bụ “aha njirimara gị”), paswọọdụ onwe gị nke eji abanye akaụntụ gị (nke a mechara “paswọọdụ gị”) na adreesị ozi-e nke gị, nke dị ugbu a “email gị” ). Ndi kpuchido ozi maka akaụntụ gị na “Rikoooo.com” site na iwu nchekwa-data nke etinyere na obodo nke na akwado anyị. Ozi ọ bụla karịrị aha njirimara gị, paswọọdụ gị, na adreesị ozi ịntanetị gị nke "Rikoooo.com" n'oge usoro ndebanye bụ ma ọ bụ iwu ma ọ bụ nhọrọ, na ikike nke "Rikoooo.com". N'okwu niile, ịnwere nhọrọ nke ozi dị na akaụntụ gị ka egosiri n'ihu ọha. Ọzọkwa, n'ime akaụntụ gị, ịnwere ike ịhọrọ ịpụ ma ọ bụ pụọ na ozi ịntanetị sitere na sọftụwia phpBB na-akpaghị aka.
Ibeere paswọọdụ gị Agbanyeghị, a na-atụ aro ka ị ghara iweghachi otu paswọọdụ gafee ọtụtụ weebụsaịtị dị iche iche. Paswọọdụ gị bụ ụzọ ịnweta akaụntụ gị na “Rikoooo.com”, yabụ biko kpachara anya na enweghị ọnọdụ ọ bụla onye ọ bụla sonyere na “Rikoooo.com”, phpBB ma ọ bụ onye ọzọ nke atọ, ga - ajụ gị maka paswọọdụ gị. I kwesiri ichefu paswọọdụ gị maka akaụntụ gị, ịnwere ike iji “echefuru paswọọdụ m” atụmatụ nke ngwanrọ phpBB nyere. Usoro a ga - agwa gị ka itinye aha njirimara gị na email gị, mgbe ahụ ngwanrọ phpBB ga-ewepụta paswọọdụ ọhụrụ iji weghachi akaụntụ gị.
Kwadoro site na phpBB® Achịkọta Forum © phpBB nwere oke